कांग्रेसको संरक्षणमा धादिङमा 'राधे आतंक' : राधे पक्राउ पर्दा कसरी जोडियो नाती कन्स्ट्रक्सन ! | Diyopost
कांग्रेसको संरक्षणमा धादिङमा ‘राधे आतंक’ : राधे पक्राउ पर्दा कसरी जोडियो नाती कन्स्ट्रक्सन !
मा प्रकाशित 4585 पटक हेरिएको
२०७४ असार ५ गते धादिङवेशी फिल्म हल टोलबाट साङ्कोष तर्फ जाने बाटोमा रहेको ‘सिता इटनी दिदि’को हाटलमा आयुव तामाङ साथीहरुसँग बसिरहेका थिए । ३ वटा मोटरसाइकलमा आएका अज्ञात व्यक्तिहरुले तामाङमाथि तरबार, खुँडा, खुकुरीले एक्कासी प्रहार गरे । ज्यान जोगाउँनका लागि हातले तरबार छेकेका आयुवको हात नै काटियो । आयुवको टाउको छिया छिया भयो ।
प्रत्यक्षदर्शीले मान्छे मा¥यो भनेपछि मात्रै आक्रमणकारी भागेका थिए । आयुवकी श्रीमती लक्ष्मी राई तामाङले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा आफ्नो पतिलाई ज्यान मार्ने उद्देश्यले आक्रमण गरिएको बताइन् । उनको जाहेरीमा घटनाको मुख्य योजनाकार राधे भनिने राधाकृष्ण भण्डारी नै रहेको उल्लेख थियो ।
‘घटना भएको दिनभन्दा अघिल्लो दिन राधे भनिने राधाकृष्ण भण्डारीले सन्देश तामाङलाई गाडीमा लिएर हिँडेको र मेरो पतिको हत्या गर्ने योजना बनाएको सुनिन आएको । विपक्षीहरु मध्ये नेपाल प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सुचीमा रहेका राधाकृष्ण भण्डारी राधेसहित उक्त समुहकै सदस्यहरु रहेको बुझीएको र मेरो पतिलाई ज्यान मार्न राधाकृष्ण भण्डारीकै योजना अनुसार मेरा पति बसेको ठाउँ सुराक गरी मार्ने उद्देश्यले मोटरसाइकलमा आई हतियार प्रहार तत्काल मोटर साइकलमा भागेका हुन्,’ लक्ष्मिले दिएको जाहेरीमा भनिएको थियो । तर तत्कालिन प्रहरी प्रमुख एसपी सरद खत्रीको मिलेमतोमा उक्त घटनामा एक जनालाई मात्रै सजाय दिइयो । भण्डारी भने पक्राउ समेत परेनन् । स्रोतका अनुसार तत्कालिन सरकारको नेतृत्वको गरिरहेको कांग्रेसको उच्च नेतृत्वको प्रहरीमाथि ठूलो दबाव थियो ।
२०७० असार २१ गते धादिङबाट काठमाडौं आउँदै गरेका अर्का गुण्डा नाइके स्वर्गीय दिनेश अधिकारी ‘चरी’माथि काठमाडौंको सतुङ्गलमा गोली प्रहार भयो । गोली चलाउने व्यक्ति थिए–राधाकृष्ण भण्डारी उर्फ ‘राधे’ । त्यसो त राधेको आपराधीक यात्राको गुरु नै चरी थिए ।
गुण्डा नाईके समिरमान बस्नेतको आफन्त भएका कारण राधेले चरीमाथि प्रहार गरेको विश्लेषण त्यतिबेलै भएको थियो ।
चरीलाई गोली हानेको घटनापछि राधेलाई चरीको बलियो प्रतिष्पर्धी मात्रै ठानिएन राधेको चन्दा आतंक र असुलीधन्दाले तिब्रता पायो ।
केही महिनाअघि धादिङको टारीवेशी खहरे क्षेत्रमा पुगेका भण्डारीको समुहमा करिब २० देखि २५ वटा मोटरसाइकल थियो । आफू बस्ने होटलमा पुग्नुअघि नै एउटा समुहले खानतलासी गर्यो । सुरक्षा अवस्था ठीक छ भन्ने यकिन भएपछि भण्डारी सोही होटलमा बसे उनकै समुहको सुरक्षामा । उक्त होटल सञ्चालक छक्क परे ।
‘यस्तो त मैले साउथ इन्डियन मुभिमा देखेको थिएँ । तर, मेरो होटलमा आउने ग्राहक यसरी आएको पहिलो पटक हो,’ ती होटल सञ्चालकले भन्दै थिए । निलकण्ठ नगरपालिकाको अनुमतिमा धादिङको रिङ्ने क्षेत्रमा राधे समुहले अवैध रुपमा ढुङ्गा गिटि निकासी कर उठाउँदै आएको थियाे । मेयर भिम प्रसाद ढुङ्गानाले टेन्डर बिनै राधे समुहलाई ढुङ्गा गिटी निकासी कर उठाउने अनुमति दिएका थिए ।
तरूण दलकाे अधिवेशनमा भण्डरी ।
गत जेठ २२ गते बुधबार सँझ ६ बजे । धादिङको गजुरी गाउँपालिका २ स्थित मलेखु खोलामा राधे समुहले अवैध रुपमा निकासी कर उठाइरहेको थियो । गजुरी गाउँपालिकाले खोलेको ठेक्का ललितपुरको इमाडोलमा कार्यालय रहेको नाती कन्स्ट्रक्सनले पारेको छ । तर, नाती कन्स्ट्रक्सनको ठेक्कामा राधे कमिसन कारण जोडिन पुगेका थिए । नाती कन्स्ट्रसनका सबै काम राधे समुहले गर्दै आएको छ ।
पीकनिकबाट फर्कदै गरेका स्थानियमाथि राधे समुहले कर मागेपछि विवाद शुरु भएको थियो । उनीहरुसँग राधे समुहले पिकनिक खाएको स्थानको कर मागेको स्रोत बताउँछ । ‘कर माग्दै स्थानीयलाई राधे समुहका मान्छेले हामी यो ठाउँको राजा हो भनेर धम्काइएको थियो,’ एक स्थानियबासीले भने,‘तिमी राजा हो भने हामी यहाँका महाराजा हौँ भन्दै स्थानियबासी जाइलागे । स्थानियबासीलाई कुटपीट गर्न राधे आफै हतियार सहित गएको थियो ।’
राधे घरेलु हतियार सहित स्थानियबासीलाई आक्रमण गर्न पुगेको थाहा पाएपछि गजुरी प्रहरीले उनलाई गजुरी गाउँपालिका २ ताल्तीबाट हतियार सहित पक्राउ गरेको थियो ।
‘प्रहरीमाथि आक्रमण भएको थियो । २ जना प्रहरी घाईते बनेपछि राधे नियन्त्रणमा आएको हो,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्,‘उ आफै टोले गुण्डालाई मुभिलाइज गर्दै थियो ।’
माथि उल्लेखित घटनारुपी ऐनाले राधाकृष्ण भण्डारी उर्फ राधेको ‘क्रिमिनल फेस’ आपाधीक अनुहार दर्शाउँछ । राधे समुह धादिङमा एउटा डरलाग्दो आतंक बनेर जनमानसमा छाप छाडिरहेको छ । एक वर्षअघि गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले गुण्डाहरुको सफाय गर्ने तयारी थालेपछि राधे समुह मत्थर बनेको थियो । तर, भित्र भित्र आफ्नै सहोदर भाइहरु मार्फत राधेको ‘साइलेन्ट’ धन्दा विद्यमान थियो ।
धादिङको निलकण्ठ नगरपालिका– ३ बिचबजार स्थायी घर भएका राधे नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलका जिल्ला उपाध्यक्ष समेत हुन् । उनको ठेक्का पट्टा र अवैध धन्दामा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ र सहयोग छ । उनलाई संरक्षण गर्ने प्रमुख पात्र नेपाली कांग्रेसकै नेता रामनाथ अधिकारी हुन् । निलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भिम प्रसाद ढुङ्गानाले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै राधे समुहलाई सघाउँदै आएका छन् ।
मेयर ढुङ्गानाले राधे समुहलाई निलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर १० र ११ मा पर्ने आँखु खोलाको निकासी कर उठाउने जिम्मा दिएका थिए । ‘राधे समुहले त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाबाट आउने गिट्टि बालुवाको समेत निकासी कर लिने गरेको थियाे । यहाँ राधे समुहको दादागिरी नै छ,’ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका एक जनप्रतिनिधि भन्छन्,‘गाउँभरका मान्छेहरुलाई त्रासमा पारेको थियाे । तर, प्रहरी प्रशासन मौन थियाे ।’
यद्धपी निलकण्ठ नगरपालिकाका एक उच्च अधिकारी भने यतिबेला उक्त निकासी कर उठाउने क्रम रोकीएको दावी गर्छन् । ‘विवाद भएकै कारण अहिले रोकिएको छ,’ उनले भने ।
तर मेयर ढुङ्गाना भने राधे समुहलाई बचाउमा विभिन्न ठाउँमा धाइ रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठनले केही दिनअघि गरेको प्रेस मिटमा ढुङ्गाना अग्रपंत्तिमा थिए ।
गुण्डा नाइके राधेको आफ्नै स्वामित्वको कम्पनि छैन । ललितपुर स्थित नाती कन्स्ट्रक्सनले राधेलाई अघि सारेर धादिङमा हुने ठेक्का पट्टा हत्याउँदै आएको छ ।
निलकण्ठ नगरपालिकाको धादिङवेशी भर्याङभुरुङ सडक निर्माणको जिम्मा पाएको नाती कन्स्ट्रक्सनको लोकल एजेन्ट पनि राधे समुह नै हो । कम्पनिका मालिक ज्ञानेश महर्जन र राधेबीच ‘कमिसन’को दोस्ती रहेको उच्च स्रोतको दाबी छ । यद्धपी नाती कन्स्ट्रन्सनका मालिक महर्जन यो दाबीलाई अस्विकार गर्छन् । ‘यस विषयमा भेटेरै कुरा गरौँ । उहाँसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध नै छैन,’ ज्ञानेशले दियोपोस्टसँग भने ।
पक्राउ पर्नुअघि नाती कन्स्ट्रक्सनले उठाइरहेको अवैध करमा विवाद हुँदा राधे आफैले टोले गुण्डा मुभिलाइज गरेको प्रहरीको दाबी छ ।
गजुरी गाउँपालिकाले २०७५/०७६ का लागी खुलाएको निकाशी करको ठेक्का ललितपुरको इमाडोल ४ स्थित नाती कन्स्ट्रक्सनले पारेको थियो । तर, कर उठाउने काम भने राधे समुहका टाले गुण्डाहरुले गर्थे । सोही समुहले बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका स्थानियसँग कर मागेपछि विवादको रुप लिएको थियो । ‘नाती कन्स्ट्रक्सनसँग राधेले कमिसनमा काम गरेको हुनसक्छ ।
गजुरीका सबै स्थानमा राधे समुहका मान्छेहरुले कर उठाउँछन् । कतिपय ठाउँमा जबरजस्ती समेत गरेका छन्,’ गाउँपालिकाका एक अधिकारीले भने ।
धादिङका डिएसपी भन्छन्,–‘पुरानो मुद्दा खोजीका लागि पत्राचार गर्दैछौँ’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका डिएसपी रुपक खड्काले पुराना मुद्दाको खोजी भइरहेको बताए । ‘हामी अनुसन्धानकै क्रममा छौँ । सबै ठाउँमा पत्राचार गरिएको छ,’ खड्काले भने,‘विगतमा भएका सबै अपराधहरु खोजी हुन्छ ।’
BREAKING :: गुण्डा नाइके राधे भण्डारी हतियारसहित पक्राउ, धादिङ प्रहरीले सार्वजनिक गर्दै !
पर्यटनमन्त्री भट्टराईलाई प्लेनभित्रै तथानाम गाली गर्दै भिडियो खिच्ने राजावादी समूह ?